Mangani kurova paminiti zvakajairwa katsi? | Noti Katsi
Laura Torres chinobata mufananidzo | | Curiosities
Iyo katsi ndeye furry iyo iyo, kana iwe ukaisa ruoko rwako pachipfuva chake kuti unzwe kurova kwemoyo wayo, chinhu chekutanga chaunocherekedza ndechekuti inorova pamwero unokurumidza kupfuura uyo wevanhu. Zvakawanda zvekuti hazvishamise kuti unoshamisika kana zviri zvakajairika, kana kana chimwe chinhu chiri kunyatso kuitika kwaari chaunofuratira.
Ichi chiito chakanakisa kuita nguva nenguva, nekuti zvinogona kubatsira kuona kana shamwari yedu ine makumbo mana iine chero chirwere. Asi zvirokwazvo, izvo zvakakoshawo kuti uone kuti mangani kurova paminiti zvakajairwa katsi. Saka izvi ndizvo zvaticha taura nezvazvo zvinotevera.
1 Ndeupi wakajairwa moyo moyo mukati kati?
1.1 Izvo zvinorova paminiti mukitsi hazvisi izvo chete zvekufunga nezvazvo
1.2 Ndingaite sei kuyera aya ma parameter mukati yangu?
2 Iripi iyo saphenous tsinga uye ini ndinoyera sei kurova kwekati yangu?
3 Nei katsi yangu ichigona kuve nemoyo usina kujairika?
4 Kuenda kun'anga nguvai?
Ndeupi wakajairwa moyo moyo mukati kati?
Kurova kwemoyo wekati wako kunoenderana zvakanyanya nezera uye saizi. Kitsi yakajairika kurova kwemoyo iri pakati pe140 ne220 kurova kana kurova paminiti. Panyaya yekatsi, kurova kwemoyo kwakakwira kupfuura imbwa. Muimbwa izvi zvinosvika pakati pemakumi matanhatu nemakumi masere ekurova paminiti.
Kazhinji, kana kittens dzichiri diki metabolism yavo inokurumidza, nokudaro, kurovera kwemoyo wavo kwakakwirira. Ndokunge, moyo wako unorova kakawanda paminiti. Uye sezvo iwe paunenge uchikura yako metabolism inononoka, uye dzidziso, yako yemoyo rate inoderera.
Izvo zvinorova paminiti mukitsi hazvisi izvo chete zvekufunga nezvazvo
Chekutanga pane zvese, ndikuudze kuti iyekurova kwemoyo chinhu chakakosha chimiro chemuviri kana uchitarisa kuti katsi yako ine hutano hwakadii. Nekudaro, haisiriyo yega muviri paramende inofanirwa kutariswa.
Pamwe pamwe nemoyo wekubata uyo katsi yako unayo, iwe zvakare unofanirwa kufunga nezve:
Kufema frequency (FR): 20-42 kufema / min)
Nguva yekuzadza capillary (TRC): <2 masekondi
Tembiricha yemuviri (Tª): 38-39,2 ºC
Systolic reropa (PAS): 120-180 mm Hg
Zvinoreva arterial kumanikidza (PAM): 100-150 mm Hg
Diastolic reropa (PAD): 60-100 mm Hg
Urine kugadzirwa (URINARY ZVAKAITWA): 1-2 ml / kg / h
Ndingaite sei kuyera aya ma parameter mukati yangu?
Kubva pamatanho ari pamusoro unogona kunyatsoyera capillary yekuzadza nguva, mweya wekufema uye tembiricha kumba kana zvichidikanwa.
El capillary zadza nguva zvinoonekwa mumatadza ekatsi yedu. Kumanikidza nemunwe pane chingamu kuchachinja nzvimbo iri pasi pekumanikidza kuchena. Chatinofanira kucherechedza ndechekuti zvinotora nguva yakareba sei kuti dzitsvuke zvakare.
La kufema Iwe unogona kuzviona nekutarisa pachipfuva chako chekati. Isa iri yakatwasuka pamakumbo mana, kana kurara nedivi. Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge nazvo. Sezvo ini ndichiziva kuti zvakaoma kuchengeta kati yakadzikama kweminiti munzvimbo iyoyo, ini ndichatsanangura imwe nzira. Tora stopwatch, iyo inosanganisirwa neako smartphone ichakubatsira iwe, uye uverenge nguva dzinoputika chifuva chako kwemasekondi gumi nemashanu. Wedzera huwandu hwemweya wekufema iwe waunotora panguva iyoyo neana uye iwe unofema katsi yako paminiti.
La tembiricha Iwe unogona kuyera kana zvichidikanwa ne thermometer ine yakapfava tip. Zvinokurudzirwa kuti ushandise peturu peturu jelly kubva pakapinza tembiricha mubutiro rake kutora tembiricha yemuviri wake. Icho chinhu chavasingawanzo kufarira uye chinovashungurudza, saka ini handikurudzire kuti utore tembiricha yake kunze kwekunge chiremba wako wezvemhuka achizviona sezvakakosha.
Munyaya ye kukwira kwemoyo izvo zvinouya mupfungwa kuisa ruoko rwedu pachidya chake, kuruboshwe pakati pembere yechitatu neyechina, tichitsvaga moyo. Asi chaizvo zviri nyore kuyera kurova kwemoyo mutsinga yesaphenous.
Iripi iyo saphenous tsinga uye ini ndinoyera sei kurova kwekati yangu?
Chinzvimbo chakanyanya kugadzikana chekuyera chiyero chemwoyo Mune iyo saphenous vein iri nekuisa kati yedu pamakumbo ayo mana, kunyangwe isu tichigonawo kuzviita nekatsi yakarara yakatwasuka pane rimwe remativi ayo.
Paunenge uchinge uine katsi yako mune imwe yeizvi zvinzvimbo enda kune imwe yemakumbo ekumashure, kuchidya chake. Isa ruoko rwako nechigumwe chako pachidya chekunze uye mimwe minwe pachidya chemukati. Iwe unozonyatsonzwa iko kurova. Sezvakaita nemhepo yekufema zvinotora nguva yemasekondi gumi nemashanu uye nhamba yekurohwa iyo inokupa kuti uwedzere nemana.
Nei katsi yangu ichigona kuve nemoyo usina kujairika?
Kurova kwemoyo wekati kunogona kukanganiswa nezvinhu zvinoverengeka. Zvisinei, izvi hazvirevi nguva dzose kuti mudiki wedu ane matambudziko emoyo. Heino runyorwa rweanowanzoitika mamiriro umo katsi yedu inogona kuve isina kujairika kurova kwemoyo:
Kana iwe uri mune mamiriro e kunetseka
Kana iwe uri kutamba.
Izvo zvine kupindwa nechando.
Izvo zvine obesidad
Kana uine chirwere cheshuga
Kana iwe uine chero moyo kana kutenderera kweropa matambudziko.
Kana iwe usina mvura.
Kana iwe uine kurwadziwa.
Ukatambura chepfu kana chepfu.
Dzimwe nguva hazvisi nyore zvachose kuziva kana kati iine mamiriro emoyo kana kwete, sezvo feline inyanzvi kana zvasvika pakuvanza marwadzo. Zvino, sezvandakataura muchikamu chakapfuura, kurova kwemoyo handicho chega chinhu chatinofanira kufunga nezvacho.
Enda kunzvimbo yako yaunovimba nayo yezvipfuyo kana iwe ukaona kuti katsi yako yakasviba, haina rondedzero, inotsamwa, haidye kana kudya zvishoma kupfuura nakare, kana inodya zvine mutsindo.. Kunyangwe ukanwa mvura zvakanyanyisa kana kusanwa zvachose. Chikonzero ndechekuti kana katsi dzisina kunyatsonaka chimwe chekutanga chinokonzereswa nevakawanda ndechekuti ivo vanonyanya kutsamwa, ivo vanofembedza zvakanyanya. Inogona kana kukukwatura iwe paunoyedza kuibata kana kuibata, payakange isati yamboita. Chimwe chikonzero chekutaurirana chinogona kunge chiri pavanenge vasina kubuda mubhokisi ravo rejecha uye vachizviita mune dzimwe nzvimbo dzeimba, vanhu vazhinji vanofunga kuti mhuka inozviitira kutsamwisa, asi kure nekuva izvo, iko kunoratidza kuti chimwe chinhu hachisi Patsi yako chaiyo.
Zvakare kana iwe ukaona kuti katsi yako inorasikirwa nekubatana kwemakumbo kana uchifamba, iyo inomedzera mate, iyo inorutsa furo kana kuita manyoka, enda nekukurumidza kune vet yako. Inogona kunge iri nyaya yekudhakwa kana chepfu uye hapana nguva yekutambisa. Uye zvinopera pasina kutaura kuti kana iri katsi ine isingasviki gore, zvese zvinowedzera kukurumidza nekuti ivo vari panjodzi kune chero chii chinoitika kwavari.
Ndinovimba posvo iyi yakashanda kwauri. Uye rangarira kusarega nguva ichipfuura. Hupenyu hwako hunogona kunge huri munjodzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Mangani kurova paminiti zvakajairwa katsi?
Iwe unofanirwa kumutora kuenda kun'anga nekukurumidza sezvazvinogona. Ndiye chete anogona kukuudza chaizvo chirwere chaanacho, uye marapirwo acho.